ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာထဲက လုပ်ရမယ့်အရာများ – MyStyle Myanmar
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆိုတာ ကြိုးစားအားထုတ်လို့ အကောင်းဆုံးအရွယ်ပါ။ ဒီအရွယ်မှာကြိုးစားထားမှ အသက် ၂၀ ကျော်ပြီး တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်လာတဲ့အရွယ်မှာ အောင်မြင်နေတဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာထဲက လုပ်ရမယ့်အရာတွေကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဗဟုသုတရစေမယ့်၊ အသိဉာဏ်တိုးစေမယ့်စာတွေကို များများဖတ်ပေးပါ။ စာများများဖတ်တဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့ စာမဖတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့ အတွေးအခေါ်က အရမ်းကိုကွာခြားပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ အချိန်ဖြုန်းနေမယ့်အစား စာများများဖတ်ပေးပါ။ ဘာသာစကားတွေဆိုရင် သင်တန်းတောင်သွားတက်စရာမလိုပါဘူး။ အိမ်မှာပဲ စာအုပ်ဝယ်ပြီးလေ့လာနိုင်တယ်။
ဘာသာစကားသင်တန်းတွေတက်ပြီး ကွန်ပြူတာသင်တန်းတွေတက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ကိုယ်ကဘယ်လမ်းကြောင်းကိုသွားမှာလဲ? ဘာလုပ်ချင်တာလဲ? ဘာကိုဝါသနာပါတာလဲ? ဒီသုံးချက်ကို အရင်သိအောင်လုပ်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ကိုယ့်ဖြစ်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်း ကိုယ်လုပ်ချင်တာ၊ ဝါသနာပါတာကို ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ အဲ့တာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့သင်တန်းတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်ပါ။
အင်တာနက်ခေတ်ကြီးထဲမှာ ကိုယ်လိုချင်တာ၊ ကိုယ်သိချင်တာတွေအားလုံးကို အင်တာနက်ကနေ ရှာလို့ရပါတယ်။ အင်တာနက်ကနေရှာပြီး အရာရာကိုသိနေအောင်လေ့လာပါ။ စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ Motivation Video တွေကိုများများကြည့်ပါ။ ဒါတွေက သင့်စိတ်ကို မြင့်တင်ပေးလို့ အရမ်းအကျိုးရှိစေပါတယ်။
ကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေတွေများများထားပါ။ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းပေါများတာလည်း လာဘ်တစ်ပါးပါပဲ။ ကိုယ်အကူအညီလိုတဲ့အခါမှာ အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ တချိန်ကိုယ်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့အခါမှာလည်း မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းပေါများခြင်းကြောင့် အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေလည်း အများကြီးရရှိစေပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ မခိုင်မြဲတဲ့အချစ်တွေကအများကြီးပါ။ ဒါကြောင့် တစ်ခုခုဆိုရင် စွန့်လွှတ်သင့်တာကို စွန့်လွှတ်ပါ။ အဲ့ထဲမှာပဲ နစ်မွန်းနေတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့။ ရည်းစားနဲ့ပြတ်သွားလို့ ဘာမှမလုပ်နိုင်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေလည်း မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ကိုယ့်ဘဝတက်လမ်းအတွက်ပဲ အာရုံစိုက်ပြီး အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်။
MyStyle Myanmar2020-02-22T21:06:53+06:30February 22nd, 2020|Lifestyle, အထွေထွေ ဗဟုသုတ – General Knowledge|